Inotevera Apple Watch inogona kuita pasina mabhatani epanyama | Ndinobva mac
Ichokwadi kuti huturu hutsva hwaitarisirwa panguva yeWWDC 2018. Zvisinei, zvine chokwadi chekuti michina mitsva ichasvika kudonha kunotevera. Y Iyo Apple Watch inosvika zvechokwadi nekutaridzika kutsva uye nekumwe kuchinja kwenyama.
Rangarira kuti isu tatova nehumbowo hwematsva 13-inch MacBooks anogona kuisa parutivi MacBook Air; isu takavewo nehumbowo hwe a nyowani modhi MacBook Pro iine mukana wekuwedzera memory yayo ye RAM kusvika 32 GB; uye zvinokwanisika kuti isu tigoona iyo nyowani Mac Pro pamwe nekuvandudzwa Mac mini. Zvino, maererano ne makuhwa ekupedzisira, the Apple Watch inogona kuita pasina mabhatani epanyama mukuvandudzwa kwayo.
Semuenzaniso, iyo Dhijitari Korona iyo iwe yauinayo izvozvi, pamusoro pekukwanisa kufamba kuti uende kuburikidza nemenyu, zvakare inokutendera iwe kuisvinira kuti ubvume. Mumuenzaniso mutsva, kutenderera kweCrown kunenge kuripo, asi pulsation yaizobviswa uye mota yehaptic yaizoshandiswa kudzorera mhinduro inotevedzera iyo yakakosha kiyi. Ndokunge, mune mamwe mazwi: isu tichava nechimwe chinhu chatakatomboona muiyo iPhone 7 ine bhatani reImba neTouch ID Imwe yezvikwata zvakare kubheja pane iyi tekinoroji iwo mapaipi ekutsikisa ayo ave neMacBook neMacBook Pro mabhuku ekunyorera.
Zvichakadaro, iro rimwe divi bhatani raizobviswa uye bhatani-rinobata bhatani raizowanikwa. Chii chaunowana kubva kune ese Apple mafambiro? Wana iyo yakatowedzera mvura isinawatchwatch iyo yaizobvisa chero kupinda kwezvinwiwa mukati. Ndiri kureva, tora smartwatch mamwe oparesheni kumatambudziko ezuva nezuva.
Pakupedzisira, sezvavanotaura pamusoro Fast Company, aya mabhatani-anobata mabhatani anozovewo nechinangwa chechipiri: unganidza mamwe data pahutano hwemushandisi. Isu tinorangarira zvakare kuti Apple Watch iri kuve chishandiso chine simba chinogara chichiongorora hutano hwedu. Uye isu tiri kugara tichiona mabhenefiti: iri kuponesa hupenyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Inotevera Apple Watch inogona kuita pasina mabhatani epanyama